Iindaba -Ukuthintelwa kwemveliso akukakhululekanga, kwaye ukuphuculwa komda kwimfuno kuphakanyisiwe, okukhuthaza ukuqhubeka kokuphanjiswa kweempahla.
Ukuthintelwa kwemveliso akukakhululekanga, kwaye ukuphuculwa komda kwimfuno kuphakanyisiwe, okukhuthaza ukuqhubekeka nokonakaliswa kwezinto ezikhoyo.
Ngokubhekisele kwizixhobo zokwakha, eMantla mpuma, e-China naseMntla Ntshona e-China kubonwe ukuncitshiswa okuncinci ngenxa yezixhobo ezihlaziyiweyo kule veki, kwaye eminye imimandla inyuse imveliso ukuya kumaqondo ahlukeneyo. Umntla we-China kunye noMazantsi-ntshona e-China enze ngokungaphaya. Phakathi kwabo, iNyakatho yeTshayina ibangelwe lutshintsho oluncinci lokuqiniswa ekuphunyezweni kwezithintelo kwimveliso kunye nefuthe lokucinywa kwamandla eMzantsi-ntshona. Umthamo wehlise isantya kule veki, ke ubonelelo ngokubanzi lukhule kancinci. Ngokubhekiselele kwiikhoyili ezishushu, inani leenkampani zekhoyili ezishushu eziqalele kwimveliso lenyuke ngokubonakalayo ukusuka kwinyanga ephelileyo, kwaye imveliso inyuke yaya kwiitoni ezingama-3,271,900. Iindawo eziqala ukusebenza kwakhona zigxile eMantla nakuMzantsi-ntshona wase China, kwaye indawo ezincitshisiweyo zemveliso zigxile kuMbindi China.
Ngokubhekisele kwizixhobo zokwakha, iinxalenye ezisemazantsi nezikumantla zelizwe zehle iitoni ezingama-38,000 kunye neetoni ezingama-56,700 ngokwahlukeneyo, kunye nokonyuka okunyukayo kweetoni ezingama-23,900 eMpuma China. Ukusuka kumbono wengingqi, uMzantsi weTshayina, uMntla weTshayina, kunye noMzantsi-mpuma we China zezona ndawo ziphambili zokuncitshiswa kwamachibi. Ngokubhekisele kwimisinga eshushu, imimandla esemazantsi kunye nasemantla yehle iitoni ezingama-6500 kunye ne-15 lamawaka eetoni ngokwahlukeneyo ukusuka kwinyanga ephelileyo, ngelixa impuma yeChina inyuke kancinci nge-7 lamawaka eetoni kwinyanga ephelileyo. Lilonke, ukwanda okwangoku esitokisini ikakhulu kungenxa yokuba izithintelo zokuhamba kwezixhobo eHenan, Jiangsu, Hubei nakwamanye amaphondo azikasuswa ngokupheleleyo, kwaye isantya sezitokhwe eziphumayo siye sehla, kodwa uninzi lwentsalela amaphondo asaqhubeka nokuhla okwezitokhwe.
Ngokubhekisele kwizixhobo zokwakha, sithatha i-rebar njengomzekelo, imimandla esemazantsi nenyakatho yehle ngeetoni ezingama-75,900 kunye neetoni ezingama-34,900 kwiveki ephelileyo, kwaye iMpuma China inyuke ngeetoni ezili-17,000 kwiveki ephelileyo. Xa kuthelekiswa nexesha elifanayo kunyaka ophelileyo, iNyakatho yeTshayina yangoku ingaphezulu kweetoni ezingama-8.93 kunangexesha elifanayo kunyaka ophelileyo, kwaye iMpuma yeTshayina kunye noMzantsi China ziitoni ezingama-46,400 kunye neetoni ezingama-564,800 ezantsi kunexesha elifanayo kunyaka ophelileyo. Ngokubhekisele kwimiqolo eshushu, i-East China kunye ne-North China behle i-13,800 yeetoni kunye ne-10,600 yeetoni ukusukela kwiveki ephelileyo, kwaye iSouth China inyuke nge-25,000 yeetoni kwiveki ephelileyo. Lilonke, ukuhla koludwe lwezinto zentlalo kule veki kuye kwanda xa kuthelekiswa neveki ephelileyo. Ukongeza kuphuculo oluthe chu kwimfuno engqongqo, ikwangenxa yemfuno yokuqikelela. Abanye abathengisi bathatha inyathelo lokuqala inani elincinci lokugcina.
Uluhlu olupheleleyo lweemveliso ezintlanu eziphambili kule veki yayiziitoni ezingama-21,347,200, ukwehla kweetoni ezingama-232,700 kwiveki ephelileyo. Phakathi kwabo, uluhlu lwezinto zokwakha lwehle nge-166,200 yeetoni, ukuhla kwe-1.2%; uluhlu lwamacwecwe yayiziitoni ezingama-66 500, ukwehla kwe-0.9%. Uluhlu olupheleleyo lwexesha elidlulileyo lwaluyi-21.57 yezigidi zeetoni, ukonyuka kweetoni ezingama-209,800 kwiveki ephelileyo. Phakathi kwabo, uluhlu lwezinto zokwakha lonyuke ngeetoni ezingama-234,400, ukwehla nge-1.7%; uluhlu lweplate luwile iitoni ezingama-24,600, ukwehla kwe-0.3%.
Ngokumalunga nonikezelo, ubonelelo ngokubanzi lubuyile kancinci kule veki, ngokunyuka kwenyanga nenyanga kweetoni ezingama-51,400 zeemveliso ezinde kunye nokunyuka kweetoni ezingama-49,300 zemveliso yeplate. Ukukhumbula ukuba ukuncitshiswa kwemveliso emikhulu ikakhulu kungenxa yeempembelelo zezinto ezininzi ezinjengokuhla kwebango, amaxabiso ezinto awayo, ukuncipha kwengeniso yamashishini esinyithi, iintlekele zendalo ezenzeka rhoqo kunye nezinye izinto, imiqobo yomgaqo-nkqubo wesizwe kunye nezithintelo kwimveliso zamkelwe intengiso, kunye nemida yokuveliswa kwemveliso kunye nezicwangciso zokunciphisa imveliso ziye zamiliselwa ngokulandelelana. Iindidi ezintlanu eziphambili zeemveliso zensimbi zehlisiwe zaya kwinqanaba eliphantsi apha enyakeni. Ukusondela phakathi ku-Agasti, ifuthe lezinto ezilungileyo ezinje ngemveliso engathintelwanga, ukuphuculwa komda webango, ulawulo lweentlekele zemvula, njl. Ukuqhekeka kwamashishini esomlilo okwangoku, i-coil eshushu kunye neplate yeNzuzo ifikelele kwi-yuan yeetoni ezingama-750, itoni, i-917 yuan / itoni kunye ne-1,115 yuan / itoni ngokwahlukeneyo, ethi yona ivuselele inzondelelo yeenkampani zentsimbi ukuze iphinde iqale imveliso. Kodwa ngokujonga imeko yonyaka ophelileyo, u-Agasti 2020 wayesele ekwinqanaba eliphezulu kwisiqingatha sesibini sonyaka, kwaye imveliso yancitshiswa kancinci emva koko. Ke ngoko, akunqatshelwe ukuba unikezelo lwangoku lweentlobo ezintlanu eziphambili lufikelele kwinqanaba eliqhelekileyo kwisiqingatha sesibini sonyaka. Ukonyuka okuthe ngqo kwimveliso kwixesha elizayo kuxhomekeke ekuphunyezweni kwengingqi.
Kwicala leemfuno, ukusuka kwindawo yokujonga idatha enkulu, isebe lokuthengisa izindlu nomhlaba liyaqhubeka ukuphola, umgaqo wokuthengiswa kwezindlu unyuse "iplagi", kwaye imveliso kunye nokuthengiswa kweemoto kunye nezinto zokumba azonelisi. Zonke zibonakala zibonisa ukuba ukusetyenziswa akuphuculanga. Nangona kunjalo, ngokujonga kutshintsho lwempahla yangoku, uluhlu lwezinto zentsimbi kunye nolweemarike luye lwehla ngaxeshanye. Nangona ubukhulu bungekho bukhulu kwaye akukho ndlela icacileyo yokusetyenziswa kwensimbi, kukho amathuba aphezulu okuba imeko yokuphucuka kumda webango ayizukutshintsha. Ingabonakala kwimeko yokuthumela izinto ezingaphezu kwe-500 zeenkampani zekhonkrithi zasekhaya ezingaphezulu kwe-70% yokuthunyelwa kweenkampani zekhonkrithi ezifumanekileyo, kwaye ibango leziza zokwakha liza kuqhubeka nokukhululwa, ngelixa ukusetyenziswa kweeslabs kuya kusebenza ngokufanelekileyo ixhaswa ikakhulu kukuthunyelwa ngaphandle okunamandla. Ukujonga kutshintsho lwempahla kunyaka ophelileyo, kuye kwakho ukuphazamiseka okubalulekileyo ukusukela ekuqaleni kukaSeptemba. Nangona uluhlu lweempahla lwanda kancinci ngexesha loSuku lweSizwe, imeko esezantsi yaqhubeka de kwaphela unyaka emva kweholide. Nangona umgaqo-nkqubo walo nyaka unyanzelise uninzi lwezithintelo kwimveliso, kusekho ukubakho koqikelelo lwasekhaya olungqongqo. Ke ngoko, ubungakanani bokuphangwa kunye nokusetyenziswa kwesiqingatha sesibini sonyaka kunokulindelwa.
Ukwakha iProfayili yeAluminiyam, IPpgi Ppgl, Aluminium ngefoyile ye coil, Isinyithi seAluminiyam-Zinc, Hot-kwalenza Steel, Iphepha leAluminiyam,